M/weyne ku-xigeenka Puntland ‘Axmed Karaash‘ oo kulan la qaatay guddiga gurmad ka shaqeeya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta M/weyne ku-xigeenka Puntland ‘Axmed Karaash‘ oo kulan la qaatay guddiga gurmad ka...
M/weyne ku-xigeenka Puntland ‘Axmed Karaash‘ oo kulan la qaatay guddiga gurmad ka shaqeeya
Garowe (Halqaran.com) – Madaxweyne Ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa xarunta Qasriga Madaxtooyada ee Garoowe kulan kula qaatay guddiga gurmadka ee Gobolka ay Puntland u taqaano Gadafuu.
Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa kulankan warbixin uga dhegaystay guddiga gurmadka ee gobolka Gadafuu, oo Madaxweyne ku-xigeenka la wadaagay halka ay wax u marayaan iyo sida uu u socdo, Qorshaha loogu gurmanayo Gobolka Gardafuu oo ay saameyn xooggan ku yeesheen Roobabkii dhowaan ka da’ay Puntland.
Madaxweyne Ku-xigeen Axmed Karaash ayaa bogaadiyay Shaqada socota iyo dadaalka loogu gurmanayo Gobolka Gardafuu.
guddiga gurmadka Puntland
M/weyne ku-xigeenka Puntland ‘Axmed Karaash‘
Nabaddoono maanta lagu dilay magaalada Muqdisho
Muqdisho: Qarax dhimasho sababay oo lala eegtay Xildhibaanno hore
In kabadan 180 Al-Shabaab ah oo lagu dilay Shabeellaha Hoose
Muhiimadda Af-Soomaaliga iyo Halgankii loo soo galay
HalQaran Staff - January 21, 2021 0
Qormo (Halqaran.com) - Sida aan la wada socono qoraalka Afka Soomaaliga waxa uu soo maray maraaxil kala duwan. Laga soo bilaabo 1949kii, waxaa jiray...